LG waxay AirPlay 2 iyo HomeKit ku heleysaa telefishinadooda isbuuca soo socda | Wararka IPhone
Tani waa war xiiso leh tan iyo markii Samsung ahayd kii ugu horreeyay ee ku dhawaaqay helitaanka muuqaaladaan telefishinnadiisa. Dhowr daqiiqo ka dib markii warka lagu shaaciyay CES ee Las Vegas, noocyo kale ayaa raacay iyaga oo ku dhawaaqaya imaatinka AirPlay 2 iyo HomeKit telefishinadooda casriga ah.
Xaaladdan oo kale, dhowr waxyaalood waa in la muujiyaa oo tan ugu horreysa ay tahay in LG Kuuriya ay leeyihiin shuruud muhiim u ah imaatinka xulashooyinkan in la fuliyo waa in yihiin telefishanno la soo saaray sannadkan. Marka kaliya moodooyinka ay shirkaddu soo bandhigtay sannadkan 2019 ayaa loo isticmaali doonaa in lagu isticmaalo AirPlay 2 iyo HomeKit.
LG waxay haysaa liis garayn badan oo badeecooyin ah oo la heli karo waxaana ka mid ah waxaan ka helnaa taleefannada casriga ah, makiinadaha dharka lagu dhaqo, qaboojiyeyaasha iyo dhammaan noocyada qalabka guryaha iyadoo shalayna ay ku shaaciyeen bartooda rasmiga ah ee Twitter-ka. imaatinka xulashooyinkan telefishankaaga inta lagu jiro usbuuca soo socda:
Homekit wuxuu sii deynayaa 1 toddobaad. Isticmaalayaasha waxay u baahan yihiin cusbooneysiinta macruufka 12.4 si ay u sameeyaan Airplay2.
- LG Australia (@LG_Australia) 23 ee July ee 2019
Liiska qalabka ku habboon HomeKit iyo AirPlay 2 oo ay daabacday Apple sannadkan waxaan ka helaynaa dhowr nooc oo LG ah:
Hirgalintaan waxaa lafilayaa inay ka bilawdo wadanka mas'uulka ka ah ku dhawaaqida daahfurka, Australia, oo laga sii wado wadamada intiisa kale todobaadyada soo socda. Haatan ma hayno wax war ah oo ku saabsan imaatinkiisa dalkeena markaa waxay noqon doontaa wakhti sii sugida ilaa si rasmi ah loogu dhawaaqo sida ay ku sameeyeen Australia.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » LG waxay ka hirgalin doontaa AirPlay 2 iyo HomeKit telefishinnadooda usbuuca soo socda
Khariidadaha Apple: Tusaale shaqooyin badan oo dhab ah oo shaashadaha iPadOS ah laga qaado